Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sakafo vaovao amin'ny sidina Uganda Airlines: Grasshoppers?
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany UAE • Vaovao Mafana Oganda
Tonga amin'ny sakafo Uganda Airlines tsy ho ela?
Menatra tamin'ny fanehoan-kevitra niparitaka tao amin'ny media sosialy izay naneso ny Ogandey ny fanambarana voasarona izay, raha nibedy ilay mpandeha diso, dia nanoro hevitra ny zotram-piaramanidina ihany koa ny hanampy. ny hanim-py eo an-toerana Nsenene ( valala lava tandroka) ao amin'ny sakafo ho an'ny sidina isam-paritra sy iraisam-pirenena.
“Nandray lesona avy amin'ny zava-nitranga izahay. Ny sasany amin'ireo mpanjifanay dia mankafy an'i Nsenene, ”hoy ny fanambarana an'habakabaka. “Mieritreritra izahay ny hampiditra Nsenene, sakafo matsiro Ogandey eo an-toerana, ao amin'ny sakafonay ho an'ny sidina isam-paritra sy iraisam-pirenena raha angatahina. Ity fanampiana an'i Nsenene ity dia hitondra ny kolontsaina Ogandey ho an'izao tontolo izao. Ny hetsika dia hampiroborobo ny varotra fizahan-tany sy ny fiveloman'ny olona ao amin'ny rojo sandan'ny valala mandroso. "
Na izany aza, ny Uganda Airlines dia nampitandrina ny amin'ny fiverimberenan'ny fitondran-tena toy izany ao anaty sambo, mampitandrina fa ny fampitandremana ny mpandeha amin'ny traikefa an-tsena tsy voafehy toy izany dia mety hiafara amin'ny fampidinana ny mpandeha tsy misy fiheverana fanampiny.
Nilaza i Shakira Rahim, Talen'ny Fifandraisan'ny Ogandà Airlines, tamin'ny resadresaka tamin'ny fahitalavitra tao amin'ny NTV fa ny zotram-piaramanidina dia hanontany ilay mpandeha rehefa tafaverina izy mba handefa famantarana ho an'ireo mpandeha izay mitondra tena amin'ny fomba tsy mahafinaritra ao anaty sambo. Niaro ny ekipa izay nolazainy fa nanandrana nisakana ilay rangahy izy mba hanome toerana ho an'ny mpandeha. “Tsy afaka manao izany mihitsy ianao amin'ny sidina iraisam-pirenena, satria misy mpandeha an-tsambo izay hanohy ny diany any an-kafa. Ny sakafo tsy nandalo fanaraha-maso manara-penitra sy kalitao dia tsy mahazo miditra ao anaty sambo; izany no olana, ary izany no fenitra,” hoy i Rahim.
Hoy i Vianney Lugya, Talen'ny Raharaham-bahoaka ao amin'ny Sampan-draharahan'ny Sivily Sivily Ogandà: “Tsy anisan'ny zavatra voarara ny valala. Tsy resaka fiarovana, araka izany, ny niafaran’ny valala tamina fiaramanidina. Ny hany olana hojerena dia ny fomba nitondran'ilay mpandeha ny tenany tamin'ny fiaramanidina iray. Ny hany toe-javatra hojerena dia raha mandrara an'io zavatra io ny firenena misy ny fiaramanidina."
Ny Minisitry ny Asa sy ny Fitaterana tezitra, Jeneraly Katumba Wamala, izay nianjeran'ny zotram-piaramanidina, dia tsy nanelingelina ny teniny tamin'ny famelezana ny karavasy tamin'ny baiko famaizana ho an'ireo mpiasa izay niasa tamin'ny fotoana nitrangan'ny zava-nitranga. Nibitsika i Wamala hoe: “Momba ny horonan-tsary nivezivezy tao amin'ny media sosialy nisy olona nivarotra an'i Nsenene tao amin'ny @UG_Airlines, dia niresaka tamin'ny mpitarika ny zotram-piaramanidina aho mba handray fepetra amin'ireo mpiasa niandraikitra rehefa nitranga izany.” Ny jeneraly Wamala no nitarika ny zotram-piaramanidina nanomboka tamin'ny fanendrena azy tamin'ny taona 2019, ary ny zavatra farany holeferiny dia ny tsy fahampian'ny zotram-piaramanidina.
Ny eTN dia nahafantatra fa i Paul Mubiru, ilay mpivarotra resahina, na dia nanao fialan-tsiny ampahibemaso aza, dia nosamborina rehefa nihetsika ny tompon'andraikitra amin'ny fifindra-monina ao amin'ny faritra fahatongavana ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Entebbe rehefa niverina avy tany Dubai androany 19 Novambra 2021 tamin'ny 11. :49h. Notazonina tao amin’ny kaomisarian’ny seranam-piaramanidina izy ary miandry ny fiampangana azy. Ny Fikambanan'ny Mpivarotra ao an-tanànan'i Kampala (KACITA), izay misy azy, dia nandinika ny raharaha tamin'ny nivoady fa hanasazy an'i Mubiru izay mpandraharaha mpividy ihany koa amin'ny anaran'ireo mpivarotra ao an-tanàna.
Ho an'ny sasany, mety ho hita ho mahery fo i Mubiru raha mitsara ny mpandeha – Ny ankamaroan'ny mpivarotra Ogandey izay mandeha amin'ny làlan'i Dubai amin'ny varotra – anisan'izany ny mpandeha sinoa roa izay nandray anjara tamin'ny fividianana ny hanim-py. Ho an’ny hafa dia olon-dratsy mendrika hatao tsinontsinona izy noho ny fanalam-baraka ny firenena. Amin'izy ireo, ny fitondran-tena toy izany dia filohan'ny mpandeha an-tanety amin'ny fiara fitateram-bahoaka izay mitory sy mivarotra entana
avy amin'ny zava-pisotro malefaka, fanafody ho an'ny hery fiarovana, fiakaran'ny tosidrà, ary diabeta ao anatin'ny iray, dia matetika no atolotry ny mpitsabo nentim-paharazana na milaza tena tsy misy sakana na inona na inona.
Mety hohamarinin'ny tantara i Mubiru raha manatanteraka ny fampanantenan'izy ireo ny zotram-piaramanidina hampiditra ireo biby matsiro ireo amin'ny zava-bitany manokana.